PMP Akapupurirwa Professional Interview Mibvunzo - ITS Tech School
Inobvunzurudzwa inopiwa nechivimbo uye chokwadi ndeyezvose zvinokosha mugoridhe. Pasinei nokuti iwe uri unhu kana iwe unoda humwe hutsika kuti uwedzere kuparadza basa rako romufaro. Heinoi 14 Hurukuro Inobvunza neMhinduro kune PMP anozivikanwa Professional kuti akunde kuongororwa kwevanongobvunzurudzwa pakutanga.
Project Management Hurukuro Mibvunzo neMhinduro
PMP Mibvunzo yekubvunzurudzwa uye Best Replies:
1. Ndiudze pamusoro pako.
Tanga uye upedze neunyanzvi hwokugadzirira mberi kwezvaunofunga. Panguva iyo mubvunzurudzo arikubvunza mubvunzo iwoyo kuti vaone kuti chii chinokuita kuti iwe ufunge kuti iwe ndiye unonyanya kukosha panzvimbo ino, saka upe mhinduro yakakodzera. Edza kusanganisa hupenyu hwako mune mhinduro iyi, kungoomerera kune unyanzvi.
2. Wandoshanda kupi imwe nguva munguva ichangopfuura?
Yako yekare yakashanda nhoroondo yekubatana nePPP kuvimbisa kugadzirira. Itii zvawakaita chaizvoizvo uye chero upi zvake. Saizvozvowo taura nenzira ipi iyo kugadzirisa iyo nzvimbo inokubatsira iwe kuti ushandise mberi mune zvaunoda.
3. Iwe unobatanidzwa mune basa iri here?
Iva wakarurama nemhinduro iyi. Mibvunzo yekutevera inogona kuva pamusoro penharaunda yebasa rawakabata nayo uye chero zviitiko zvakaratidzwa zvikuru.
4. Ndezvipi matambudziko aunotarisira kuita mune izvi?
Mukuona kwekusangana kwako kwekare, mhinduro yako inofanira kuisa musanganiswa wezvidzidzo zvakajeka uye zvaungada kuisa kune iyo itsva yakasimba.
5. Unozviona kupi iwe mumakore emakore e5?
Muchiedza chekutaura kwehutungamiri hwehutungamiri, iwe ungangodaro unoda kushanda mune sangano uye unoita kuti ibudirire imwe kubudirira.
6. Sei wakasiya basa rako rokupedzisira?
Kutsvaga zviri nani masuo akazaruka kana mukana wekushanda pane imwe nzvimbo. Kurukurai kuti kutora PMP kugadzirira kwakagadzira sei mukana wako wekushanda sangano iri zviri nani.
7. Chii chinonyanya kukosha kwako kubudirira?
Taura pamusoro pezvawakaita, zvikwereti uye tsika dzeboka muchidimbu, uye kuti zvakabatsira sei kuenderera mberi nekugadzira zvose mune zvose.
8. Chii chatingazokwanisa kutarisira kubva kwauri mumazuva ekutanga e90?
Ita mhinduro inonakidza yekupindura apo iwe unogona kuisa PMP yako kugadzirira kushandisa kushandisa zvibereko zvakanaka.
9. Ndezvipi zvaunofambisa?
Iva akagadzirira mberi uye ugovapa assume iyo inoziva kuti iwe unokwanisa, kunyanya kufunga nezvekushandira kwekugadzwa kwehutano.
10. Ichokwadi here kuti iwe uri munhu anobatana?
Vabvunzurudza vako vanoda kuziva kana iwe unogona kushanda neboka ravo rakakodzera uye kana rakakosha, gadzirira vamwe.
11. Wakaita chero zvipiro zvekuita kumunda wekutengesa hutungamiri?
Muchiitiko chekuti wakachengetedza nyaya yakambofungidzira kutambanudza hutungamiri mune bhizinesi, dzidzisai kuongorora pamusoro payo uye kubvumira mibvunzo yekupikisa.
12. Sei tichifanira kutitora?
Kurukurai zvinokonzera mauri pane sangano uye izvo zvaunouya nazvo patafura.
13. Iwe ungagona sei kupwanya zvipingamupinyi zvemhizha zvisati zvaitika?
Ongorora chero zvipingamupinyi pabasa rawakambotaurira pamusoro pemutengi kana kuti wakaita sei nemamiriro ezvinhu anonyongedza mukutora.
14. Iwe uchashanda pasi pesimba here?
Pamusoro pekuda kwekuti kushungurudzwa kwekutambudzika ndicho chinhu chako, panguva iyoyo udza pachena kwavari kuti unobata sei shungu mumamiriro ezvinhu akamanikidzwa.
Onawo:PMP Certification Career Opportunities